SAHAMINTA/RAYI-URURINTA LOOGU TALAGALAY HAWEENKA SOOGALOOTIGA AH IYO KUWA LA HAYBSOOCO
Isbaddalada Wanaagsan ee Lagu Abuuro Nolosha Dumarka
Adeegyada Dumarka Muhaajirka Ottawa (Immigrant Women Services Ottawa) waa wakaalad ku saleysan bulshada oo u adeegta dumarka muhaajirka iyo kuwa kacsan. Waxaan fursado u abuurnaa dumarka marka ay soo galaan bulsho cusub, dib u dhisaan noloshooda ka madax banaan dagaalka, iyo gaaraan ujeedooyinkooda qof ahaan. Sannad kasta, shaqaalaha xilka qaaday iyo kuwo ku shaqeeyo iskaa wax u qabso ee IWSO waxay kaalmeyaan in ka badan 2,000 dumar iyo caruur.
Degdegga – Kaalmeynta Dumarka – Kaalmeynta Caruurta – La xariir Faragelinta Shiddada iyo La-Tallinta. Ogow in Badan
Ogow in Badan
Tarjamada Afka iyo Tarjamada Qoraalka
Ingiriisi – Fransiis, Adeegyada Tarjamada Luqadda Lacag La’aan – Khidmadda laga bixiyo Codsiyada Adeegga, Ogow in Badan.
Heshiis iyo Midnaan
Adeegyada Shaqada – Tababarka Kombuyutarka – Xanaanada Cunugga – Hawlaha – Heshiiska iyo Mideynta, Ogow in Badan.
Waxaad noqotaa Qof ku Shaqeeyo Iskaa Wax u Qabso
Halkaan ka Dalbo
Macaamilka IWSOFanka iyo Farshaxanka
Aniga waxaan jeclahay fasalada fanka maxaa yeelay waxay keentay dareenkena qarsoon iyo waxay gudaha igu dhaaftay farxad qurxoon. Aniga waxaan xasuustaa in hal maalin aan aad u ciishooday, waxaan in aysan jirin wax horay u socdo sida la rabay, marka waxaan bilaabay fasalka in aan isticmaalo midabo iftiima, iyo ammaanka, saaxiibtinimada jawiga, waxaan arkay midabadeyda oo isu baddala sida ubax qurxoon. Waan aamini waayay nafteyda.
Macaamilka IWSOKa qeybgalaha Shaqo Raadinta
Aniga waxaan hadda si wanaagsan u fahamsanahay sida loo baaro shaqada Canada. Macalinka ku sugan Kullanka Raadinta Shaqada (Job Search Workshop) aad ayuu u naxariis badnaa iyo wuxuu igu kaalmeyay in aan aqoonsado xirfadaheyga iyo aqoonteyda. Aniga waxaan ogsoonahay in aan goor dhaw helo rajo xagga shaqadeyda.
Macaamilka IWSOXafiiska Sharciga Qoyska Qareenka
Turjubaanka wuxuu qof aad u aqoon badan oo sharafta ilaaliya, taasoo aad u dajisay macaamilka.
Shaqaalaha IWSO waa i soo garab istaageen waqtigii ugu xumaa nolosheyda. Aad ayaad ugu mahadsan tahay taageeradaada iyo xoojinta.
Macaamilka IWSOJaamacadda Ottawa
Turjubaanka wuxuu ahaa qof aad u aqoon badan oo ku fiican in lala shaqeeyo.
Macaamilka IWSOTurjubaan aad u aqoon badan, lagu farxo in lala shaqeeyo. La Talliyaha Qeybta Shiddada Dhibbanaha Boliiska Ottawa
Aniga waxaan rabaa in aan mahadnaq oo ka timaada dhanka hoose wadnaheyga in aan u soo jeediyo IWSO. ISWO awgeed, ugu dambayn, Aniga waxaan haysta guri ammaan ah iyo nolol. Shaqaale kasta oo ka tirsan IWSO wuxuu kaalmeeyaa qof ila mid ah. Waxay igu kaalmeyaan in aan ka gudbo waqtiga ugu adag nolosheyda. Iminka waxaan haystaa meel ii gaar ah oo aan joogo, gabarteyda waxay tagi kartaa dugsiga. La'aanta kaalmada IWSO, Aniga ma isu jeedi maanta.
Macaamilka IWSOShaqaalaha Guriga Harmony
Aad ayaan ugu faraxsanahay adeegyada IWSO iyo waxaan isku haleynaa iyaga si ay dumarka ula xariiriyaan dumarka ku hadla luqado kale.
Marka aan imid Canada, waxaan dareemay in aan lumay, ay arrimaha igu batteen. Waxaan u mahad celinaa in ley soo diray IWSO. Waad ku mahadsan tahay taageerada aad na siisay, hoggaaminta iyo macluumaadka aad bixisay. Aniga waxaan hadda dareensanahay in aan helo adeegyada iyo waxaan dareensahay in aan qeyb ka ahay bulshada Ottawa.
Waxaan u mahad celineynaa naxariista kuwa taageeray shaqadena 30 sanno ee la soo dhaafay, saddaqadiina iyo waqtiga aad geliseen, ha ahaato awoodda socoto ama munaasabadda ama hawsha socota.